Layma's World: လှလှပပလေး
Posted by lay-ma at 2:10 AM
အရမ်းမိုက်တဲ့ ကဗျာ... <3
သိပ်သဘောမပေါက်ဘူးဗျ ဘာလို့ လဲမသိ ဦးနှောက်က ကဗျာဆို မပြေးဘူး ဒါပေမယ့် လှလှပပလေး
ခုတုံးလုပ်ကြတယ်… ဆိုလို့စိတ်မကောင်းဘူးး ။
>Capricorn ... ကဗျာဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးပါ..။
>သားကြွက်.. ဘယ်ပေါက်မလဲ.. ရေးထားတာက ခပ်ဂေါက်ဂေါက်စတိုင်လ်ကိုး..။ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့.. အဲဒါ လေးမ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး.. ဟီးး.ဟီး..။
>ကိုအတာ... စာလုံးပေါင်းပြထားတာတောင် လွဲအောင်ပေါင်းတယ်.. သတ်ပုံမှားနေတယ်..။
>မိ... မိ.. ပို့ စ်မော်ဒန်လေ.. ဂယ်ရီရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ နားလည်ရခက်သလို ငါရေးတဲ့ ကဗျာတွေ နားလည်ရခက်အောင်ရေးထားတာ... ဖတ်တဲ့သူတွေ နားမလည်လေ... ငါပျော်လေပဲ... အဟေး..ဟေး..။ နင်ရေးပေးတာကြီးက ငါသိပြီးတာ ကြာာာာာာာာာာာ နေပြီ...။
သိတော့ဘူး လေးမရာ.. လှလှ ရယ် ပပ ရယ်ပဲ သိတော့တယ်.. :D
ဗျို့ အစ်မကြီး. လှလှပပ အကြောင်း အရာ တစ်ခုအကြောင်းကို လှလှပပ စာလုံး တွေသုံးပြီး လှလှပပ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ လှလှပပလေး ဆုံးမစကားပြောနေပါလားဗျ.
မှားတာတော့ တတ်နိုင်ဘူး လေးမ ရေ.. ရပင့် နဲ့ ရရစ် က အမြဲမှား :P
မလေးမ ကဗျာကလဲ လှလှပပလေး ..
တပုဒ်တမျိုးနဲပ မရိုးနိုင်အောင်ရေးတတ်တဲ့ ကဗျာဆရာမကြီး အမလေးမရေ
လှလှပပ ဖတ်သွားပါတယ်ဗျ ။ မောင်မျိုးက နားမလည်ဘူးတဲ့ လည်ချင်တဲ့အခါကျတော့လဲ သူပဲ ဟားဟား
ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မကြီးရေ :)
“အ” … ခခွေး ရပင့် စလုံးသတ် ကို ´ကို ´ဖြစ်အောင် ဘယ်လို စာလုံးပေါင်းလိုက်ပါ့လိမ့် :aghast:
>မနုစံ.. မ.. က လှလှပပလေး နောက်သွားပြန်ပြီ...။
>မှော်ဆရာ. တော်တယ်.. တော်တယ်.. ဆုံးမစာကို ဆုံးမစာမှန်းသိတယ်..။
>ကိုအတာ.. အဲဒါကြောင့် လူပြိုကြီးက လူပျိုလို့ပြောတာကိုး..။:P
>မီ.. လှလှပပလေး ... ငြိလား..။
>ညိမ်းညို ... နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပြီး ဖတ်သွားတာ ဖြစ်ရမယ်..။
>တင့်ထူး... ပြော.... ၀ူး...။
အ” … ခခွေး ရပင့်
စလုံးသတ် … ကို … .....
မိုက်တယ်နော်..မမ..ချစ်လို့" စ" တာနော်.... :P